काठमाडौँ उपत्यकामा जोरबिजोर प्रणाली हट्यो, के खुल्ने के नखुल्ने ? — Sanchar Kendra
काठमाडौँ उपत्यकामा जोरबिजोर प्रणाली हट्यो, के खुल्ने के नखुल्ने ?
काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा थप खुकुलो पारिएको छ । आजबाट उपत्यकामा सबै सार्वजनिक सवारीसाधन चलेका छन् । सवारीसाधनमा लागू गरिएको जोरबिजोर प्रणाली पनि हटाइएको छ । जोरबिजोर प्रणाली हटेसँगै सडकमा सवारी चाप पनि बढेको छ ।
आइतबार बसेको उपत्यकाका तीन वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको बैठकले थप केही क्षेत्रलाई खुकुलो बनाउँदै निषेधाज्ञा एक साता थप्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसअघि २५ सिटभन्दा माथिका बस मात्र चल्ने गरी निषेधाज्ञा थप गरिएको थियो । सफा टेम्पो र निलो माइक्रोले कुल ९ जना यात्रु बोक्न पाउँछन् । पछाडि तेर्सो सिटमा ४/४ जनाको दरले ८ जना र चालक छेउमा १ जना गरी कुल ९ जना यात्रुभन्दा बढी बोक्न पाउने छैनन् ।
सबै प्रकारकार सभा, सम्मेलन, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्सबार नाचघर, क्लब लगायत धेरै मानिस भिडभाड हुने क्षेत्र खोल्न नपाइने । खुला स्थानमा मानिसहरु भेला भई भिडभाड गर्न,जुलुस, जात्रा महत्सव भोज भतेर लगायतका क्रियाकलाप गर्न नपाइने । विवाह ब्रतवन्ध तथा सामूहिक रुपमा गरिने सांस्कृतिक कार्यहरु होटल पार्टी प्यालेजमा गराृउन नपाइने ।
पुजारीबाट हुने नृत्य पूजा बाहेकका अन्या धार्मिक तथा साँस्कृतिक गतिविकिहरु सञ्चालन गर्न नपाउने । शैक्षिक संस्थाहरु भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन गराउन नपाउने । स्थानीय ढुवानी विहान ९ बजेदेखि ११ बजेसम्म र अपरान्ह ४ बजेदेखि ७ बजेसम्म सञ्चालन गर्न नपाउने ।
औषधी तथा स्वास्थ्य सामाग्री सम्बन्धी पसल जुनसुकै समयमा निर्बाध रुपमा संचालन गर्ने । औषधी पसल बाहेक अन्य व्यवसायहरु साँझ ६ : ०० बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइने । अत्यावश्यक वस्तुको अनलाइन अर्डर, रेष्टुरेण्ट एव फास्टफुड तथा अन्य अर्डरहरु टेक अवे वा होम डेलिभरी प्रयोजनकाृ लागि काठमाडौँ उपत्यका भित्र साँझ ७ः०० बजेसम्म सञ्चालन गर्ने ।
काठमाडौँ उपत्यका भित्र सञ्चालन हुने सवारी साधनले स्वीकृत सिट क्षमता भन्दा बढी यात्रु राख्न नपाइने । यात्रु र सवारी चालक, सहचालकले अनिवार्य स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्डको पालना गर्नुपर्ने । सफा टेम्पो तथा निलो माइक्रोले बुँदा ३ (क) लगायत देहायका मापदण्ड पालना गरी सञ्चालन गर्ने । उपत्यका भित्र सञ्चालन हुने निजी सवारी साधनको हकमा स्वास्थ्य मापदण्डको अनिवार्य पालना गरी सञ्चालन गनए पाइने ।
यस्तै काठमाडौं उपत्यकाका सरकारी अस्पतालमा कोभिड–१९ का बिरामीको संख्या फेरि बढ्न थालेको चिकित्सकहरुले बताएका छन् । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका कोभिड फोकल पर्सन डा. सन्तकुमार दासका अनुसार पछिल्लो पाँच दिनयता अस्पतालमा उपचार गराउन आउने कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दो रहेको बताए ।
‘दैनिक १३/१४ जनाको संख्यामा नयाँ केस आउने गरेका छन्’ डा दासले भने, ‘नर्मल कोभिड बेडमा भन्दा आईसीयूमा आउने बिरामीको संख्या बढी छ ।’ दोस्रो लहर उत्कर्षमा पुगेर ओरालो लाग्दा अस्पतालमा उपचाररत संक्रमितको संख्या ७५ मा झरेको थियो । अहिले बढेर ९५ जना पुगेको उनले बताए । उनका अनुसार अस्पतालको आईसीयूमा २२ र भेन्टिलेटरमा १७ जना संक्रमित उपचाररत छन् ।
भक्तपुर अस्पतालमा एक साताअघि १३ जना संक्रमित उपचाररत थिए । तर अहिले आईसीयूमा ५ जना र एचडीयूमा १२ जना गरी १७ जना संक्रमित उपचाररत रहेको अस्पतालका फिजिसियन डा सुनिल ढुँगेलले बताए । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा उपचाररत कोरोना संक्रमितको संख्या स्थिर रहेको अस्पतालका निर्देशक डा. अनुप वास्तोलाले बताए ।
असार दोस्रो साता (असार ८–१४ गते) ८६८९६ नमूना परीक्षण गर्दा १८५४३ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको देखिन्छ । असारको तेस्रो साता (असार १५–२१ गते) ७४६८९ नमुना परीक्षण गर्दा १७१४० जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । मन्त्रालयको तीन साताको तथ्यांकलाई मूल्यांकन गर्दा कोरोना संक्रमण प्रत्येक साता केही प्रतिशत बढेको देखाउँछ ।
दोस्रो लहर उत्कर्षमा पुगेको बेला सरकारले निजी अस्पतालसँग सेवा सम्झौता गरी संक्रमितको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको थियो । तर अहिले यो व्यवस्था खारेज गर्दै सरकारी अस्पतालमा मात्रै संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।